Miofana mandritra ny efatra andro ny mpitsara momba ny fiarovana ny tontolo iainana, ny ala sy ny biby arovana. Be loatra ny resaka mandeha amin’ireo fanondranana an-tsokosoko ny harena voajanahary arovana, nefa toa afa-maina fotsiny ny mpanao azy ireny. Izay no nandraisana izao hevitra izao hampita amin’ireo mpitsara ny tsara ho fantatra momba ny fiarovana ireny ala sy biby ireny sy ny lalàna mifandraika amin’izany.
Manamafy ny fiaraha-miasa ny faritra Menabe sy Melaky ho fiarovana ny mpizahatany. Miainga avy eo Belo Amoron’i Tsiribihina hatrany Bekopaka, fiarovana ireo mpitsidika ny Tsingy Bemaraha any amin’ny faritra Melaky. Maro amin’ireo mpizahatany vahiny sy mpikaroka no mijery io Tsingy io, mirefy 72 340 ha, ahitana karazana harena maro samihafa. Koa fampandraisana anjara ny mponina izany ho tombontsoan’ny kaominina hisian’ny fidiram-bola, sy ho an’izay manao ny asa fiarovana.
Nanaovana atrikasa ny fanomanana ny fisokafan’ny taom-piotazana lavanila, amin’ny 22 jona, any amin’ny faritra Analanjirofo, toy ny natao tany Atsimo Atsinanana. Tsara ny vokatra lavanila, tsara toy izany koa ny vidiny, telo taona misesy izao, mahatonga ny halatra isan-karazany sy ny fiotazana mbola manta. Tsy maintsy arovana ity lalam-pihariana iray ity. Mahatsara toerana an’i Madagasikara ny fanondranana lavanila maina 1 600 t eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, mampiditra 600 tapitrisa euros.